Esi music on iPhone enweghị iTunes
Music bụ otu n'ime isi atụmatụ na iPhone nwe enwe na ha ụbọchị na-eme. iTunes na-enye ihe magburu onwe isi iyi n'ihi na egwu na-akpọ na nbudata music. Otú ọ dị, iPhone nwere ikike na-egwu music si saịtị ndị ọzọ dị nta. A na-emepụta erughị ala n'etiti ọrụ na ụfọdụ nwere ike ịpụ na-eji iPhones ka na-ege ntị music site na ndị ọzọ media isi mmalite. Otú ọ dị nke a ekwesịghị ịbụ ikpe dị ka e nwere ọtụtụ ụzọ nke ịnweta music enweghị bụchaghị iji iTunes.
Nkebi nke 1: Olee otú iji nweta music on iPhone iji ígwé ojii ọrụ
Part 2: Olee otú iji nweta music si uzo ozo ka iTunes
Part 3: Olee otú iji nweta music on iPhones iji free ngwa
Part 4: Olee otú iji nweta music on iPhones iji gụgharia ọrụ
Part 5: esi music on iPhones iji TunesGo
Ígwé ojii ọrụ na-enye ohere magburu onwe n'ihi na otu onye na-ege ntị ha music ma online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị. Na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ owning Mgbakọ ngwaọrụ dị ka laptọọpụ, mbadamba na smartphones, echiche nke gị mgbasa ozi ọdịnaya a na-ekpochi pụọ n'ime afọ a na desktọọpụ na-ochie. Ekele Cloud ọrụ na-enyere aka iji hụ na anyị music faịlụ dị ebe na mgbe anyị mkpa ha.
Ojii nchekwa na-enye oru oma ọrụ ndị dị ka nyefe gị data online enweghị ojiji nke a onye na kọmputa. Ndị na-esonụ ígwé ojii ọrụ dị maka egwu na-akpọ music on iPhones.
1. Google mbanye
Google mbanye awade a na-emesapụ aka free ohere nke 15 GB n'elu n'imeghere a Gmail akaụntụ ma ọ bụ na-ejikọ ya na otu dị na otu. Ọ na-kwe nkekọrịta nke ọmụma, faịlụ, videos na music faịlụ. The isi drawback nke na-eji Google mbanye bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla n'ụzọ nke na-agbakwunye nchekwa site referrals ma ọ bụ na-ejikọ na otu akaụntụ ka mmadụ mgbasa ozi.
2. dobe igbe
Dobe igbe bụ otu n'ime ole na ole online nchekwa ngwọta na-enye ahịa n'ihi na blackberry na Linux. Ọ ana achi achi na gị data na-adịghị hapụrụ n'agbanyeghị ihe flavor nke nkà na ụzụ ị na-eji. Ihe bụ isi free akaụntụ abịa na a free ohere nke 2 GB na awade 500MB free nchekwa nke ọ bụla Ntuziaka.
Amazon nwere ya ojii nchekwa ngwọta na-na amasị nke Goggle na Microsoft. Ya ígwé ojii mbanye dị mfe karịa ya ogbo ebe ọ enwereghị plugins. Ya isi na-elekwasị anya bụ ebe na-echekwa gị akwụkwọ, foto na vidiyo. The free akaụntụ awade 5GB nke nchekwa nke nwere ike ịgbatị 20 GB kwa afọ a na-eri.
na-enye ya klientele na nso 16GB nke free nchekwa. Ọ na-awade ọzọ uru ma ọ bụrụ na ị na-akọrọ ndị enyi gị. Na ya na-emesapụ aka free akaụntụ na a ukwuu ala ọdịdị, Mega bụ otu nke kasị mma nhọrọ n'ihi na ọtụtụ ndị na-achọ ihe online nchekwa ngwọta.
Ọ na-enye 15 GB nke free ohere ọhụrụ ọrụ nke nwere ike mụbara site Ntuziaka usoro. Ọ nwere ike na-enweta ma obu site na a web Portal ma ọ bụ site n'iji mobile ngwa maka windows, Android na iOS.
Ọ na-enye 50 GB na onye ọ bụla ga-emepe a onye na akaụntụ. Free akaụntụ na-naanị awa 16 GB na ọzọ na-eri mgbe eji iPhones. Maara nke ọma maka ala nke iji na ihe, Adrive bụ nnọọ ọma chekwaa usoro.
Otu n'ime ndị kasị ịtụnanya ojii nchekwa saịtị. Ọ na-enye izo ya ezo nke ọmụma mgbe na-ebugote na pụrụ hụrụ dị iche iche ngwaọrụ. Ọ na-enye 20GB nke nchekwa. Ọ na-enye ahịa software maka Microsoft Windows, Mac OS, Android na ndị ọzọ na ihe nchọgharị weebụ.
Nke a bụ a Microsoft ojii nchekwa na saịtị ọ rebranding onwe ya. Ọ na-enye 500 MB maka enyi nile ị na-ezo na ndị ọzọ nchekwa mgbe ị ndabere ọmụma. Ihe ọzọ 3GB nke data nchekwa na-awa ọ bụrụ na ị na-ejikọta gị OneDrive ka gị na ekwentị igwefoto mpịakọta.
A ojii nchekwa ụlọ ọrụ na-akpakọbara ọzọ mesiri ike na nzuzo nke data. Ke adianade do ọ na-enye 1 GB maka ihe ọ bụla Ntuziaka. Ọ na-enye ihe kasị mma data izo ya ezo ọrụ mgbe tụnyere ndị ọzọ ojii nchekwa ọrụ.
Otu online nkwado ndabere na mpaghara a nchekwa ọrụ na-enye abụọ ụdị nke izo ya ezo. Clients dị maka Windows, Android na iOS nyiwe. Ihe bụ isi free ngwugwu awade 2 GB ohere nchekwa ma nke a nwere ike mụbara site na Ntuziaka usoro.
Nkebi nke 2: Olee otú iji nweta music si uzo ozo ka iTunes
Ndị mmadụ chọọ na internet na-atụ anya ịhụ uzo ozo ka iTunes iche iche ihe. Ụfọdụ na-atụ anya iTunes uzo ozo na-ngwa ngwa na-ebufe music ka iOS ngwaọrụ mgbe ndị ọzọ na-enwe agụụ na-enweta ihe kensinammuo iTunes uzo ozo maka ijikwa music na nkiri ọba akwụkwọ. Isiokwu a na-ekpuchi n'elu 3 kasị eji uzo ozo ka iTunes.
TunesGo bụ ihe nile-na-otu music management omume na ohere ọrụ seamlessly nyefee, download na hazie ha music faịlụ a na ọrụ enyi na enyi interface.
Ọ nwere mfe okirikiri nhọrọ ukwuu window ma na-akwado ma windows na Macs. Ụfọdụ n'ime ndị nkịtị atụmatụ nke TunesGo agụnye:
Ikike nyefee music ọ bụla na kọmputa na-ngwaọrụ
Na-akwado songs na video faịlụ na ihe karịrị iri atọ dị iche iche formats.
Awade a abụọ ụzọ mmekọrịta ie si na kọmputa na-iPhone na azụ
Ike ịnyefe music azụ ka iTunes
2. Copy trans njikwa
Detuo trans Manager bụ ihe dị mfe iTunes ọzọ dị ka ọ na-enye ohere ọrụ ịgbakwunye music, videos, fim na ndị ọzọ media ọdịnaya site a PC na iPhone ma ọ bụ iPad enweghị iTunes. Ọrụ nwere ike nyefee media ọdịnaya site a na kọmputa na-IOS ngwaọrụ enweghị erasing mbụ data na ngwaọrụ. Nanị downside bụ na Copy trans njikwa bụ nanị maka windows dị ka ọ na Mac version dị.
3. Media Enwe maka Windows
Media enwe bụ elu music njikwa na-ahapụ gị ịnyagharịa ma jikwaa music collections on Windows 8 ngwaọrụ. Ọ ejisie na-ahazi ya listi ọkpụkpọ, na arụ orụ music na fim na ike na akpaaka Dj na ike jukebox maka na ndị ọzọ. Ke adianade do ọ na-ekere ma ọdịyo na vidiyo faịlụ dị iche iche formats. Dị ka onye ọzọ iTunes, ọ ga-eji mbubata gị ẹdude iTunes n'ọbá akwụkwọ na-windows nke na-ewe nkeji ole na ole.
Nkebi nke 3: Olee otú iji nweta music on iPhones iji free ngwa
Ọ bụ a nkịtị echiche bụ na creators nke iPhone bu n'obi nọgide na-enwe ike n'ezi ihe nke ha mobile sistemụ si 3rd otu nnyonye anya. Ọ bụ ezie na ọ bụ ike na-free music on iPhone, ụfọdụ music Downloaders otú jikwaa na ọ mere. N'okpuru ebe chọta a ndepụta nke kasị mma free download ngwa maka iPhone.
1. Free MP3Box
Ọ na-eje ozi ma iyi na play music n'ihi na gị iPhone. Ọ nwere ike na-igwu egwu ma na-enuba ndụ music n'aka gị tube. Na nke a ngwa, ị nwere ike itinye ọkacha mmasị gị song na Favourites na ịchọpụta na-ekpo ọkụ chaatị dị iche iche.
2. Sound tube
Sound tube bụ a music ngwa na otu nke kasị mma interface. Ọ categorizes music dabeere na ụdị ie oge gboo, Pop, oké nkume. Ke adianade do ị ike ihuchalu songs tupu ị na-ahọrọ na-egwu ha. A search nhọrọ na n'elu nke ihuenyo simplifies usoro nke e ji music. I nwekwara ike ike a playlist na-akụ songs ka mmasị gị.
Music DL bụ a music ngwa na-enye ohere otu ịchọ music mmasị. Dị nnọọ ka Sound tube, ọ na e dere a search mmanya n'ụlọ n'elu na-enye ohere otu ka mfe chọọ music site na ige. Ọ na-ekwe onye ike a playlist nke 25 songs.
Nkebi nke 4: Olee otú iji nweta music on iPhones iji gụgharia ọrụ
Gụgharia bụ a na-ewu ewu ọrụ nke na-enyere onye na-ele ndụ ma ọ bụ n'oge ndị gara aga karịrị otu njikọ Ịntanetị. Nke a nwere ike ịbụ oké saịtị n'ihi na otu onye na-ekiri ndị ọhụrụ music ndụ. The atọ kasị nkịtị gụgharia na saịtị ndị:
Ọ bụ a free online gụgharia na saịtị na ndị kasị ibu nọmba gafee ụwa. Ọ na-enye n'ihi na ihe uku ndụ gụgharia ọdịnaya ma ahụwo ihe ọnụ ọgụgụ nke songs usen na oge. Pandora awade ya ọrụ ikike ịzụta songs ma ọ bụ albums na dị iche iche online Jeriko. Nanị drawback bụ na ọrụ bụ nanị dị na USA, Australia na New Zealand.
Spotify bụ a adịchaghị gụgharia na saịtị nwere otu nke kasị ọnụ ọgụgụ nke na-eso ụzọ gburugburu ụwa. Na mgbakwunye na nkwanye ọrụ, ọ na-akwado ndị ọzọ ngwa. Ọ na-enye n'ihi na ihe uku-awụ ọsọ n'ugwu na magburu onwe onye ọrụ ahụmahụ. Ọ dịkwa mfe ịchọta ọkacha mmasị gị albums na listi ọkpụkpọ na saịtị a. Na ọ bụ dị na ma android na windows n'elu ikpo okwu.
Rdio bụ ihe online music ọrụ na awade free gụgharia na ndenye aha gụgharia ọrụ na 85 mba. Ebe ọ bụ na o nwere ngwa maka Android, IOS, Blackberry na Windows ekwentị, ọ bụ ngwa ngwa ịchụkwudo na Spotify na Pandora. Rdio na-eto eto n'ọtụtụ dị egwu na ya mwekota na Facebook enyewo nnọọ aka ntọt ndebanye aha. Ọ nwere isi mmachi na ị ike ịkekọrịta music na Spotify.
Part 5: Olee otú iji nweta music on iPhones iji TunesGo
TunesGo bụ ihe magburu onwe na-akpali akpali iTunes ọzọ maka music. Ọ na-enye maka atụmatụ na e nnoo kọrọ iTunes dị ka njikọ na android usoro. Ke adianade do ọ na-akwado site na ma Windows na Mac. Music nwere ike ibudata site na iPhone, Emmanuel, iPod site na nke a na-akpali akpali usoro. Isi atụmatụ TunesGo na-depụtara n'okpuru.
Ọ nwere ike na nyefee music ọdịnaya site na gị iOS ngwaọrụ na kwado ya na-ezere ọnwụ nke data.
Nwere ike iṅomi URL na ibudata music kpọmkwem site ị tube.
Ị nwere ike ọcha ma jikwaa gị music n'ọbá akwụkwọ.
Na-enye ohere ikere òkè nke ọmụma na media ọdịnaya gafee ma IPhone na android.
Ọ nwere ike tọghata music n'ime dị iche iche formats, ma ọdịyo na video.
Get nkọwa ndị ọzọ >> Download music si YouTube / weebụsaịtị ka iPhone / iPad / iPod
Full Guide to Nhicha gị iPhone
Olee otú Idozi iPhone Blue ihuenyo nke Ọnwụ
Top iPhone Battery Nsogbu na Olee otú iji tufuo ha
> Resource> iPhone> Olee otú iji Esi Music on iPhone enweghị iTunes